Ny sasany dia mitovitovy amin'ny fefy, ka indraindray dia misafotofoto. Na izany aza, misy fahasamihafana mazava izy ireo: ny fifehezana dia misy fanisiana telo dimanjato miaraka amin'ireo andaniny roa ireo, ary ny ampahany ny plastika dia rakotra lamosina mivantana, izay indraindray dia tsy mifanentana.
Ny fambolena dia mety ampahany na feno. Ny ampahany dia matetika mifamatotra amin'ny tampony na ny asany toy ny fanisàna ao amin'ny akanjo maingoka. Ny ampahany kely mampifandray ny endriky ny maha-izy azy sy ny firaiketam-pony, ary mameno ny sary amim-pahalemem-panahy sy am-pitiavana.
Tantaran'ny zavatra: mitafy lamba ny lamba
Pliesse dia avy tamin'ny taonjato faha-17 talohan'i JK ary lasa lavitra ny teknôlôjia. Tany am-boalohany, ny lamba vita tanana dia nanamboatra akanjo tsara tarehin'ny Ejipsiana, tsy ny vehivavy, fa ny lehilahy ihany koa. Ny voka-pandrefesana dia azo avy amin'ny fampiasana gelatine avy amin'ny taolana trondro. Nanafaka ny vala tamin'ny pensilihazo manokana ny Grika, ary nosamborin'ny Romanina tamin'ny lamba famaohana ny lamba. Ireo Vikings dia nanavaka ny maha-izy azy, izay nanamboatra ny vala tamin'ny lamba vita amin'ny tanimanga, ary avy eo dia nanamboatra ilay fitaovana tao anaty lafaoro. Nandritra ny taompolo samy hafa, ny akanjo marevaka dia azon'ireo lehilahy sy vehivavy nanan-karena sy nanan-karena, nanantitrantitra ny satany.
Tao anatin'ity lamaody maoderina ity dia nisaotra ny mpanakanto Espaniola ny akanjo Mariano Fortuni. Izy dia nahazo tsindrim-peo tamin'ny zavakanto fahiny ary namorona akanjo fiakanjo toy ny akanjo grika. Ny akanjo fitafy dia nantsoina hoe "dolphos", na hoe nantsoina hoe fashionista "akanjo dite". Akanjo lava lavalava misy akanjo lava na voaly ary indraindray izy rehetra. Nangorohoro ireo tovovavy ireo mba hivoatra amin'ny akanjo lava toy izany hatrany amin'ny hazavana, noho izany dia nirohotra tao anatin'izany izy ireo ho an'ny vahiny tao an-tranony. Soa ihany, nisy ny vehivavy toa an-dry Natasha Rambova, Sarah Bernhard sy Isadoa Duncan, anisan'ireo mponin'i Fortuny, izay nametraka akanjo maromaro tao amin'ny gorodona ho an'ny hetsika ara-tsosialy. Nanomboka teo, ny akanjo lamba dia nampidirina am-pahamendrehana ny fiainan'ny lamaody.
Ny akanjo lavalava dia lasa marika mampiavaka an'i Catherine Hepburn sy Merlin Monroe . Ireo Stylista dia nanao akanjo fitondra miloko marevaka eo ambany lohalika. Ankoatra izany, ny fialana dia hita taratra amin'ny lamaody any am-pianarana. Ireo zazavavindrano marefo amin'ny mikasika ireo kofehy vita amin'ny lamba vita amin'ny akanjo fotsy sy fotsy fotsy dia nanjary fantatry ny rehetra.
Karazana akanjo maranitra
Misy karazany maro ny akanjo maranitra. Amin'ny ankapobeny, ny akanjo dia samy hafa amin'ny halavany, ny endriny, ny tsy fisian'ny / ny fisiana fisokafana sy ny décolleté, ny haben'ireo vala, karazana ary karazana lamba.
Fitiavan'i Maxi. Indrindra indrindra rehefa manintona ny fomba amam-panaon'ny Empire miaraka amin'ny tandroka manify sy endrika maromaro. Ny akanjo lava dia tokony asongadina amin'ny firavaka vita amin'ny fehikibo na akanjo marevaka, raha tsy izany dia tsy feno ny sary. Ara-drariny ho an'ny zazavavy misy karazany.
Miakanjo miaraka amin'ny akanjo marevaka. Ity fikambanana ity dia hita matetika ao anatin'ny fanangonana ny mpamorona ankehitriny. Ny Masters dia manamboatra ny moron-tongotra, ary ny tampony dia vita amin'ny lamba iray ihany, faingina fotsiny, vita amin'ny kofehy na ny dantelina. Manome karazana zesty io sary io ary mampiavaka ny endrika mifanohitra amin'ny karazan-damba roa.
Fangatahana vitsy kely. Manome sarin'ny romantika sy ny fiaraha-mientana. Ny akanjo fohy tsy natolotr'ireo zazavavy manana endrika feno, satria ny halavan'ny halehibe miaraka amin'ny tavy telo dimanjato dia hanasongadina ny tsy fahatanterahan'ny sary. Miaraka amin'ny akanjo, kiraro ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny tongotra matevina tsara.
Sarafan dia mamboly. Azo atao ny halavany sy ny ety. Safidy tsara ho an'ny fahavaratra fahavaratra. Ny akanjo dia vita amin'ny lamba rongony na kodiarana ary mandalo ny rivotra. Tranon'ny vanim-potoana - kofehy mamirapiratra mamirapiratra miaraka amin'ny sary volom-borona sy geometrika.
Rehefa nanapa-kevitra ny amin'ny endrika tokony hapetraka ianao dia manapa-kevitra ny amin'izay tokony hatao amin'ny akanjo lavalava. Misy zavatra marobe izay mijery tsara ao anaty doda miaraka amin'ny akanjo marevaka:
jiron'ny olona iray;
pantatra malefaka eo amin'ny bokotra;
Botillons amin'ny felana - ireo modely lamaody indrindra sy ny zavatra tokony harahina?
Ireo mpilalao baolina Puma
Ry mpitaingina mandeha amin'ny ririnina - ny modely no tsara indrindra sy ny fomba hisafidianana ilay tsara?
Ny palitao tanora ny tanora
Dress from gabardine
Karazana figia "apple"
Justin Bieber tao Sydney dia nilalao baolina niaraka tamin'ny mpankafy azy
Vehivavy mofomamy ho an'ny vehivavy 2014
Hamaoka ho an'ny tongotra
Ny fanetezana sy ny orona tsy misy tazo
Soup miaraka amin'ny sausages
Lara i Flynn Boyle noho ny bikany
Ny cystis chronic - ny soritr'aretina
Lavarangan'ny lavarangana ao anatiny
Ahoana no handoavana ny lanjany?